Dal Ey Tababaran U Adeegsanaya In Ay Ubadka Yaryar Ka Caawiyaan Ama Baraan Qaabka Gurguurashada – Tusmoonline.com
Dal Ey Tababaran U Adeegsanaya In Ay Ubadka Yaryar Ka Caawiyaan Ama Baraan Qaabka Gurguurashada
Arrimaha Bulshada Dhacdooyinka Wararka	December 20, 2016	137	Like
Khubaro dhinaca qoyska iyo arrimaha ubadka la xidhiidha ka shaqeeya oo u dhashay wadanka Hindiya ayaa ugu dambayn soo saaray tijaabo ay ku guulaysteen oo ay ku diyaariyeen Ey carbisan oo loo diyaariyey in ay ubadka yaryar ee bogga ku socda wakhtiga gurguurashada ka caawiyaan qaabkii igu wanaagsanaa ee ubadkaa yaryari u gurguuran lahaayeen. Dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday dalka Hindiya kadib markii ay ishu qabatay Ey rabbaayad ah oo gur guurasho (Qaabka Ilmuhu beerka ugu socdo marka uu socod maago) baraya Ilmo yar oo Seddex bilood iyo badh jira. Eygan oo lagu magacaabo Meykal kana mid ah ku dhawaad konton Ey oo loo carbiyey in ay ubadka yaryar ka caawiyaan gurguurashada ayaa waxa uu u tababaran yahay la dhaqanka Carruurta iyo qoysaska waxaana uu hore qaab tijaabo ah guurguurasho usoo baray dhawr ilmood oo da’ ahaan ka weyn ilmahan yar ee uu wiiggan ku carbinayey qaabka loo gurguurto.
Inkasta oo koox ka shaqaysa arrimaha ubadka iyo caafimaadkoodu ay iska leeyihiin xayntan Eyda ah, Qoyska dhalay ilmahan la tababarayay ayaa aad ula yaabay qaab dhaqmeedka Eeyga, waxa ayna Eeygaasi ku tilmaameen in uu yahay saaxiib wanaagsan oo ilmahooda hadh iyo habeen ula dhaqma si wanaagsan. Arrinta kale ee xiisaha leh ayaa ah in Eygani sidoo kale wax ka yaqaanno oo lagu carbiyey qaabka loola dhaqmo ama loo madadaaliyo dadka waaweyn ee gaboobay ee u baahan ciyaarsiinta iyo daryeelka.
Najwaal Khan oo ah Hooyada ilmahan yar dhashay ayaa Telefishanka dalkaasi u sheegtay in Eeygaasi uu laabta ku soconayo illaa uu ka daba guurguurto ilmaha yar isaga oo ilmaha yar baraya kolba sida loo gurguurto ama bogga loogu socdo ee lugaha iyo gacmaha dhulka loogu qabsado. Hooyadani Waxa ay sheegtay in Eeygaasi uu yahay rabbaayo islamarkaana aannu faragalineynin arrimaha qoyska gaar ahaan Carruurta kale oo uu kaliya ku kooban yahay hawsha lloo carbiyey. Ahmiyada ugu weyn ayay ku sheegaty inuu yahay in Eeygani uu caawinayo Carruurta.